अमेरिकी नागरिक जो पर्यटक बनेर होइन, भरिया भएर सगरमाथा आधार शिविर पुगे ! – Khabarhouse
अमेरिकी नागरिक जो पर्यटक बनेर होइन, भरिया भएर सगरमाथा आधार शिविर पुगे !
Khabar house | ५ मंसिर २०७७, शुक्रबार १५:१० | Comments
काठमाडौं : विरानो देशमा पनि पराइ बनेर घुम्न मन नपराउने पर्यटक हुन्, नथानिएल मेनिन्गर। जुन देश पुग्यो त्यहीँको जीवनशैलीमा भिज्ने उनको आफ्नै शैली छ । जो’खिमपूर्ण रोमाञ्चको खोजीमा नयाँ अनुभव सँगाल्दै संसार चहार्नु उनको सौख हो। ‘एक्स्ट्रिम’ र ‘क्रेजी’ कुरा मन पराउँछु भन्ने उनका सौखको कुनै सीमा नै छैन।
सन् २०१४ मा उनी स्पेनको पाम्पलोनामा थिए। हरेक वर्ष जुलाईमा हुने बुल रन (साँढे दौड) महोत्सवमा सहभागी हुन उनले स्थानीय बुल फाइटर हरूसँग दुई महिना तालिम लिएका थिए । ‘फर्स्ट ह्यान्ड’ अनुभव लिन चाहने उनी स्पेन, बार्सिलोनामा स्ट्रिप डान्सर समेत बनेका थिए। स्पेनपछि उनी संसारकै उत्कृष्ट पाचौं ‘स्कुबा डाइभिङ’ गन्तव्य मानिने बेलिजको ‘ग्रेट ब्लु होल’ पुगे।
त्यसपछिका छ महिना उनले दक्षिण अमेरिका यात्रामा बिताए। बन्जी जम्पिङ, स्काइङलगायत ‘एडभेन्चरस’ अनुभव बटुले । फरक भूगोलको फन्को मार्दै सन् २०१९ मा उनै मेनिन्गर नेपाल आइपुगे । त्यसबेला उनले तय गरेको सगरमाथा बेसक्याम्प (इबिसी) यात्रा अहिले चर्चामा छ। उनी नेपाली भरियाहरूसँगै भारी बोकेर संसारकै सबभन्दा अग्लो शिखरको आधार शिविर पुगेका थिए।
रमाइलोका लागि होइन, भरियाको भोगाइ नजिकबाट अनुभूत गर्न। नेपालमा भरिया बनेका उनले आफ्ना अनुभव आफूमा मात्रै सीमित राखेनन्। भरिया जीवनलाई नजिकबाट अरूले पनि बुझून् भनेर डकुमेन्ट्री बनाए । ‘द पोर्टर’ नामको यो डकुमेन्ट्री यस पटकको काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सव (किम्फ) मा छानिएको छ। भर्चुअल रूपमा हुने किम्फको १८ औं संस्करण यही डिसेम्बर १० देखि १४ सम्म चल्नेछ।
किम्फ महोत्सव पूर्व तयारीका रुपमा ‘द पोर्टर’ गत अक्टोबर १३ देखि १९ सम्म अनलाइन प्रदर्शन भइ सकेको छ । प्रदर्शनपछि चलाइएको जुम प्यानल छलफलमा नेपाली भरियाका समस्या, हिमाली जनजीवन र नेपालको पर्यटनबारे कुराकानी समेत भएको थियो। ‘नेपाल र संसारभरका दर्शकले द पोर्टर हेरून् भन्ने चाहना थियो। किम्फले त्यो अवसर दिएको छ। एकदमै खुसी छु,’ हाल अमेरिकामै रहेका मेनिन्गरले सेतोपाटीसँग अनलाइन वार्तामा भनेका छन् । विस्तृतमा सेतोपाटीमा खबर छ ।